September 23, 2019 - Myitter
September 23, 2019 Myitter 0
မြို့လယ်ခေါင်မှာ ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပြီး သုံးထပ်စက်ရုံကြီးကို ဝါးမြိုပစ်လိုက်တဲ့ သေမင်းတမန်တွင်းနက်ကြီး ဒီတစ်ခါပြောပြမှာကတော့ မတော်တဆ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ လူအသေအပျောက်လည်း များစွာရှိခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဆိုးတစ်ခုအကြောင်းပါပဲနော်။ ဘာမှမသိလိုက်သေးခင်အချိန်လေးမှာပဲ မြို့လယ်ခေါင်ကစက်ရုံကြီးတစ်လုံးနဲ့ လူတွေ မြေကြီးအောက်ထဲအရှင်လတ်လတ်ရောက်ခဲ့ရလောက်အောင်ထိကို ဆိုးရွားခဲ့တာပါ။ ဂွာတီမာလာနိုင်ငံမြို့တော်မှာရှိတဲ့ တွင်းပေါက်ကြီးတစ်ခုဟာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မေလမှာ သုံးထပ်စက်ရုံကြီးတစ်လုံးကို ဝါးမျို […]
ဆေးရုံ အသွားအပြန်မှာ လမ်းလုပ်သားတွေအတွက် ရေ၊ RoyalD နဲ့ ငှက်ပျောဖီးနဲ့ ပေါင်မုန့် တွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည်
ဆေးရုံ အသွားအပြန်မှာ လမ်းလုပ်သားတွေအတွက် ရေ၊ RoyalD နဲ့ ငှက်ပျောဖီးနဲ့ ပေါင်မုန့် တွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည် ဆေးရုံ အသွားအပြန်မှာ လမ်းလုပ်သားတွေအတွက် ရေ၊ RoyalD နဲ့ ငှက်ပျောဖီးနဲ့ ပေါင်မုန့် တွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည်ရဲ့ […]
ဂျိုင်းမှ ချွေးနံ့မနံအောင် အလွယ်ဆုံးသော လုပ်ဆောင်နည်း
“ချွေးနံ့မနံအောင်ရေချိုးရင်ဆားပွတ်ချိုးပါ” ရေချိုးတဲ့အခါရေလောင်းပြီးဆားနဲ့ခြေဖဝါးက စပြီးတစ်ကိုယ်လုံးကိုဆားနဲ့ရွရွလေးပွတ်ပေးပါ။ ချိုင်းနှစ်ဖက်ကိုလည်းပွတ်ပေးပါ။ အဲဒီလိုပွတ်ပေး တာကမွှေးညှင်းပေါက်တွေမှာ ပိတ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်သွားတာကြောင့်ချွေးနံ့နံတာ သက်သာပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာငုတ်နေတဲ့အခိုးတွေလည်း ထွက်လာစေသလိုထုံနာကျင်နာတွေလည်းသက် သာစေပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ “လူအိုစော်နံ”တာလည်းသက်သာစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေဟာမိုးအုံ့ ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲတာကိုလည်းဆားပွတ်ရေချိုး ပေးရင်အကိုက်အခဲထုံနာကျင်နာပျောက်ကင်းကြ တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရေမလောင်းခင်ဆားပွတ်မယ် ဆိုရင်ဆားလက်တစ်ဆုပ်ကိုရေစွတ်ပြီးမှပွတ်ပေးပါ။ ရေလောင်းပြီးမှဆို ရင်တော့ဆားအခြောက်နဲ့ရပါတယ်။ ဆားပွတ်တာကိုအနည်းလေးတစ်မိနစ်လောက်ပွတ်ပေးသင့်ပါ တယ်။ “ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ” Shwe […]
အောက်လမ်း နင့်​ ပြုလုပ်​ထားသည့်တိုင် ပိတ်နေသောကံ ပြန်ပွင့်လာစေမယ့် ရှေးကျသောနည်းလမ်း
အောက်လမ်း နင့်​ ပြုလုပ်​ထားသည့်တိုင် ပိတ်နေသောကံ ပြန်ပွင့်လာစေမယ့် ရှေးကျသောနည်းလမ်း ဖန်​ခွက် ၂ခွက်​ ထဲ ဆား ပြည့်​ ထည့််​ သံပရာသီး အဝါ ၁လုံးစီး တင်​ ​အရိုးတံပါ ငရုပ်​သီးအ​ခြောက်​ အ​တောင့်​ ရှည်​ ၁​တောင့်​ စီ စိုက်​ အိမ်​တံခါး အတွင်း […]
ဝင်းနဲ့ဇော်တို့အတွက် ခိုင်မာတဲ့သက်သေပေါ်ပေါက်လာလျှင် အမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဟု ထိုင်းရှေ့နေပြောကြား
( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) ထိုင်းနိုင်ငံက လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုမှာ သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်လင်းနဲ့ ကိုဝေဖြိုးတို့ရဲ့ အမှုဟာ ခုဆိုရင် နောက်ဆုံး ဗဟိုတရားရုံးထိ စီရင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်… မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ထိုင်းပြည်သူတွေက သူတို့နှစ်ယောက်ကို လွတ်မြောက်စေချင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း […]
စက်လှေကားမှာ လဲကျတာတို့ ခြေထောက်ညပ်တာတို့ဖြစ်နေရင် အရေးပေါ်ပိတ်ရမယ့်ခလုပ် ဘယ်နေရာမှာလဲ
နေ့ မထင်မှတ် ပဲ လုပ်ဖြစ်လိုက် တဲ့ အကူအညီ လေးတစ်ခု ပါ. Junction city ကို ရောက်ခဲ့စဉ် စက်လှေကား မှာ အသက် နည်းနည်းကြီးပြီး ၊ ခပ်ဝဝ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် က လဲကျ နေပါတယ်. ဝိုင်းထူဖို့ ကြိုးစားရင်း […]
ရွှေလီမြို့တွင် လှောင်ပိတ်ခံထားရသည့် မိန်းကလေးအား ပရဟိတအဖွဲ့နှင့် မြန်မာ-တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့
ရွှေလီမြို့တွင် လှောင်ပိတ်ခံထားရသည့် မိန်းကလေးအား ပရဟိတအဖွဲ့နှင့် မြန်မာ-တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့ Monday, September 23, 2019 အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မြန်မာမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို တရုတ်နိုင်ငံသားများက တရုတ်နိုငံ ရွှေလီမြို့တွင် လှောင်ပိတ်ခံထားရရာ အဝေးရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ အကူအညီပေးရေးပရဟိတအဖွဲ့နှင့် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲတို့ ပူးပေါင်းကာ စက်တင်ဘာလ ၂၁ […]
ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ အယောက်စီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ဂျပန်ကိုပြန်သွားပြီးယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ဖို့အတွက် ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်လောက်ပဲလိုပါတော့တယ်..
ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ အယောက်စီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန် Monday, September 23, 2019 ဂျပန်ကိုပြန်သွားပြီးယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ဖို့အတွက် ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်လောက်ပဲလိုပါတော့တယ်.. စတစ်ဖ်ဂျော့ပြောဖူးတဲ့စကားလေးတခုရှိတယ်ဗျ “သင်အမြင့်ဆုံးကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်.. အားလုံးနဲ့အတူတကွသွားမှဖြစ်မယ်🇲🇲!” ကျွန်တော်လျှောက်လမ်းနေတဲ့ခရီးရှည်မှာအတူတကွပါဝင်ပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ အယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်အားလုံး ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်… ကျွန်တော့်ဆရာနဲ့အသင်းဖော်တွေကကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်.. ကျွန်တော့်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ပေးကြပါတယ်… အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ပွဲ […]
အိမ်မြှောင်တွေ ဘာကြောင့် အခြားနိုင်ငံတွေက ဈေးကောင်းပေးပြီး ဝယ်ကြတာလဲဆိုတာ
အိမ်မြှောင်တွေ ဘာကြောင့် ဈေးကောင်းပေးပြီး ဝယ်ကြတာလဲဆိုတာ… အိမ်မြှောင်သားစားခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တယ်ဆိုလို့ အရမ်းမအံ့သြသွားပါနဲ့။ အကြောင်းကတော့ ကျန်းမာရေးအရ အိမ်မြှောင်သားကို စားသုံးကြတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ လူတွေအမြောက်အများရှိနေလို့ပါပဲ။ အိမ်မြှောင်တင်မကပါဘူး အိမ်မြှောင်နဲ့ မျိုးနွယ်တူတွေဖြစ်တဲ့ ပုတ်သင်ညို ကင်းလိပ်ရှော ဖွတ်၊ ပုတက်လိုမျိုး အကောင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အိမ်မြှောင်အပြင် တခြားသော […]
ဆုအလီလီရရှိနေပြီဖြစ်သည့် မြန်မာ့ကြက်တောင်မယ်သက်ထားသူဇာရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကြက်တောင်မယ်လေး သက်ထားသူဇာ ဟာဆိုရင် ၂၀၂၀ အိုလံပစ် ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အပြင်းအထန် ကြိုးစားပြီးအမှတ်စုဆောင်းနေသူလေး တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူမဟာ ယှဉ်ပြိုင်သမျှ ပွဲစဉ်တွေမှာ ဆီမီးဖိုင်နယ် ၊ ဖိုင်နယ် အထိ တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်နိုင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ […]